उदयपुरमा आज पुलिस र सुनसरीको भिडन्त – Khel Dainik
उदयपुरमा आज पुलिस र सुनसरीको भिडन्त
गाईघाट (खेलदैनिक) । जारी पाँचौं रमपम उदयपुर गोल्डकप नकआउट फुटबल प्रतियोगितातर्फ आज लयमा देखिएको नेपाल पुलिस क्लब र सुनसरी–११ भिड्दै छन् ।
पुलिस हालै सम्पन्न दमक गोल्डकपको विजेता समेत हो । फाइनलमा बलियो मनाङलाई हराउँदै पुलिसले दमक गोल्डकपको उपाधि जितेको थियो । युवा खेलाडीहरुले भरिएको पुलिस टोली अहिले सुन्दर लयमा छ । साथै पुसिललाई पनि प्रतियोगिताको बलियो प्रत्याशीका रुपमा हेर्न थालिएको छ ।
Nepal Police Vs Sunsari Today. Predict Your Score 👇👇👇 https://t.co/oKBZIhICUv
— GoalNepal.com (@Goal_Nepal) May 15, 2018
उता फुटबलमा एक से एक फुटबलर जन्माएको सुनसरी–११ पनि पुलिसलाई कडा चुनौति दिने सोंचाईमा छ । यद्यपि आज जितको प्रत्याशी पुलिसलाई नै मानिएको छ । गाईघाटस्थित थरुहट उदयपुर रंगशालामा आज ४ बजेदेखि शुरु हुने खेलमा कसलाई समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ ? कसले जित्ला आजको खेल ?
← फुटबलर विराज र तेक्वान्दो खेलाडी मेलिशा सम्मानित सभामुख कप राष्ट्रिय भलिबलमा विभागीय टोली उपाधि नजिक →
भरत र नवयुग अमेरिका जाँदै जेष्ठ १, २०७५
यू डायमन्डलाई महिला भलिबल उपाधि जेष्ठ १, २०७५
महेन्द्र रत्नलाई भलिबल उपाधि जेष्ठ १, २०७५
साफ यु–२० च्याम्पियनसिपमा नेपालका दुई रेफ्रीले पनि खेलाउने जेष्ठ १, २०७५
टिवाईटी कप शुरु, पेनाङ र कारोको बराबरी जेष्ठ १, २०७५
अक्सफोर्ड बन्यो क्रिमसन कप च्याम्पियन जेष्ठ १, २०७५